Daawo:- Duqa Muqdisho oo qaab cajiib ah ku qanciyay bajaajleyaal cadhaysan oo maanta ku dibad baxay Muqdisho.
April 13, 2019 Xafiiska Puntland Faallooyinka, Maqal Iyo Muuqaal, Somalia, Wararka Maanta 4
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa ugu baaqay dhalinyaradda Banaabaxyadda ka bilowday Muqdisho in ay Xaaladda dejiyaan, islamarkaana ay go’an tahay maamulka gobolka Banaadir wax ka qabashada dhibaatadda taagan.
Eng Yariisow ayaa Cambaareyay falkii Saaka Askari ka tirsan Ciidanka Dowlada uu ku dilay Askari Mooto Bajaajle ah iyo qof Shacab ah oo la saarnaa.
Waxaa uu sheegay in Ciidanka Booliska ay go’an tahay in ay soo qabtaan ninkii falkaasi ka dambeeyay, islamarkaana inta ka horreysa loo baahan yahay in Xaaladda la dejiyo.
Bajaajleyda waxaa u badan 75% waa reer Galgaduud oo ay Bajaajka ay u iibiyeen mucaaradka lacagtii Emiradka baaritaan lagu sameeyay 10 qof halka ay lacagta ka heleen waa mid toos loo siiyay baaritaankaas baa socda Cabdiraxmaan Cabdishakuur’ Fiqi, Odowaa iyo Xassan Shiikh bay lugaha la gashay
Waad ku mahadsan tahay runtaas aad na la wadaagtay. Farqi baaxad leh ayaa u dhexeeya mucaaradnimada siyaasadeed ee ilbaxnimada ku salaysan iyo mooryaannimada cawaannimada salka ku haysa. Waa kaaf iyo ka la dheeri runtii.
Dalkani firqad yar oo qaddiyadihii fashilmay ee ay Cigaal iyo Caydiid ka la dardaarmeen ayuu weli ka xasili la’ yahay. SNM iyo USC (HAG) waa qaatiliin aan damiirka Islaamnimo, dareenka Sooomaalinimo iyo diir naxa dadnimo midna lahayn oo qaddiyaddooda qabiiliga iyo isir nacaybka ah caabudaya.
Loo ma taag heli karo dad dugaagnimo dow ka dhigtay ee aan damqasho oo dhan ba lahayn.
habar gidir xay kaa heysataa
Qofwalba oo daraasad kasameeya magaalooyinka Baladweyn, Buuloburde Jawhar Balcad Afgooye, Marka , Baidhabo iyo dhamaan Shabeelaha hoose iyo kan dhexe iyo Jubooyink , Puntland oo dhan kama jirto wareer iyodhac iyoboob iyo tuuganim, banaanbax abaabulan, iyo shacab is nacban, Sababtaa waa waa meel ay wax ka degenyihiin reer Galmudug oo cayrnimo iyo wax biniaadam uu ku dhaqmin iyo si xun u noolaasho iyo ala ka fogaasho ku dhaqma.
War Hawiyahakale cidkastaa la noolaankarta oo wax ay iku darsankaraan.
Xamar waxay la degila’adahay waa loo wada jeedaa Qoorta hadaan laga jarin Fiqi, Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Mahad Salaad iyo Odowaaiyo kuwa la beesha wax hagaagaya ma jirta.
Waxaa lagu badbaadikaraa meelaysan imaankarin Sida Baidhabo, Balcad, ama Garoowe iyo Hargeysa in caasimada Soomaaliloo raro. Kuwaan waa 10 wejiilayaal waa shayaadiin, waa balaayo